Seranan-tsambon’i Toamasina : Efa mandeha ny asa fanitarana -
AccueilRaharaham-pirenenaSeranan-tsambon’i Toamasina : Efa mandeha ny asa fanitarana
05/10/2018 admintriatra Raharaham-pirenena 0
Tafiditra indrindra amin’ny tetikasa fampandrosoana ara-toekarena eto Madagasikara ny tetikasa fanitarana ny seranan-tsambon’i Toamasina. Araka ny efa fantatra, tetikasa goavana hiarahan’ny Fanjakana malagasy sy ny Fanjakana japoney izany.
Raha ny fanazavana, mitentina hatrany amin’ny 639 Tapitrisa Dolara ny teti-bidin’ity tetikasa fanitarana ny seranan-tsambon’i Toamasina ity ka ny 65%-n’izany, izany hoe, ny 411 Tapitrisa Dolara dia avy amin’i Japon, amin’ny alalan’ny Jica raha ny 35% kosa ny an’ny Fanjakana malagasy amin’ny alalan’ny Société du Port à gestion Autonome de Toamasina, na ny Spat.
Ho an’ity orinasam-panjakana Spat ity, izy io no miandraikitra ny fitantanana ankapobeny ny seranan-tsambon’i Toamasina. Manara-maso ny asa rehetra eo anivon’ny seranan-tsambo, ny fandraisana sy famoahana ireo sambo… Anisan’ny hiandraiketan’ity orinasam-panjakana ity ihany koa, ny mahakasika ny fotodrafitrasa sy ny fikarakarana, ary ny fanavaozana… Fa eo ihany koa ny asa sahaniny amin’ny fananganana fotodrafitrasa vaovao. Manaraka izany, mbola anisan’ny andraikitra sahanin’ny Spat amin’ny ankapobeny ny fanomezana fahazoan-dalana manokana ireo orinasa rehetra miasa eo anivon’ny seranan-tsambon’i Toamasina.
Noho izany, raha ny mahakasika ny tetikasa fanitarana ny seranan-tsambo, nohazavan’ny tompon’andraikitry iray eo anivon’ny Spat, Ranaivojaona Samuel, fa efa manomboka ary mandeha tsara ny asa amin’izao fotoana izao. Anisan’izany ny asa fanotorana ho fanitarana ny fametrahana ireo “conteneurs” sy ny fiantsonan’ny fiara…
Anisan’ny asa fanitarana goavana ihany koa ny fanitarana ny toeram-pandraisana ireo sambo, na ny “quai” izany. Araka ny fanazavana hatrany, mizara ho roa miavaka tsara mantsy ny tetikasa fanitarana ny seranan-tsambon’i Toamasina. Ny andiany voalohany dia ny fanamboarana sy fametrahana ireo bolongana “béton” ilay antsoina hoe “dolos”, izay milanja 50 taonina, miisa 2 600, sy 30 taonina, miisa 800. Haharitra 30 volana eo ho eo kosa ny fanatanterahana izany asa izany. Marihina mantsy fa mizara telo ihany koa ny “quai” ao amin’ity seranan-tsambo ity, ka ny voalohany natao ho an’ireo sambo mpitondra entana ilaina eto Madagasikara, ny faharoa kosa an’ny orinasa Ambatovy manokana, ary ny fahatelo farany ilay natokana ho an’ny entam-barotra amin’ny ankapobeny sy ny “conteneurs”. Ny andiany faharoa kosa ny fanaovana ny “requalification” sy ny “appel à manifestation d’intêret”.
Mahazaka sambo lehibe
Ankoatra izay, raha ny mahakasika ilay tetikasa fanitarana amin’ny ankapobeny, hisy ny fanitarana ny “quai”, izay mirefy 470 m, ary atao ho 16 m kosa ny halalin’ny rano. Raha vita ity asa fanitarana ity, izany hoe any amin’ny taona 2022 ny akaiky indrindra amin’ny fahavitan’ny asa sasany, dia hahazaka sambo roa lehibe, izay mirefy hatrany amin’ny 350 m sy 400 m indray miantsona, ny seranan-tsambon’i Toamasina. Raha ireo sambo lehibe efa fampiasa any ivelany ireo, mahazaka 13 000 hatrany amin’ny 15 000 “conteneurs” ny iray. Raha ny zava-misy ankehitriny anefa, sambo iray ihany no mbola zakan’ny “quai”, ary mahatonga ny fitohanana izany, satria tery ihany koa ny toeram-panatobiana ireo “conteneurs”, ka miandry ny lamina rehetra vao afaka miditra indray ny sambo manaraka manala entana.
Tsiahivina fa ny taona 2008 no nanombohana ny fanadihadiana sy ny fifanarahana teo amin’ny Fanjakana malagasy sy ny japoney. Efa tokony ho tontosa izany fa noho ny olana ara-politika nisy teto no nampihantona indray ny fanatanterahana izany. Ny taona 2015 kosa no namerenana amin’ny laoniny indray ny tetikasa, ary ny taona 2017 no vita ny fifanarahana eo amin’ny famatsiam-bola avy amin’ny Fanjakana Japoney. Voarakitr’izany fifanarahana izany kosa, fa ao anatin’ny 40 taona no hamerenan’i Madagasikara ilay sora-bola fanampiana avy amin’i Japon voalaza ery ambony, ka mbola tsy mandoa sy mamerina izany isika ao anatin’ny 10 taona voalohany.
Amin’izao fotoana izao, mbola any aorian’i Maorisy sy La Réunion isika, eo amin’ny resaka fivezivezen’ny entana amin’ny seranan-tsambo. Voalaza fa ny seranan-tsambon’i Maorisy dia mahazaka “conteneurs” hatrany amin’ny 600 000 isan-taona, ary 450 000 kosa ny an’i La Réunion, raha 240 000 isan-taona kosa ny an’i Madagasikara.
Izay indrindra no nahatonga ny fametrahana ilay tetikasa fanitarana ny seranan-tsambon’i Toamasina, mba handresena lahatra ireo kaompania mpitatitra an-dranomasina ho avy eto amintsika.
Voalaza ihany koa fa izay orinasa mahazo ny fitantanana indray no miantoka ny fametrahana ireny fibatana “conteneurs” manokana ireny, na ilay antsoina hoe “grue portique”, izay efa saika mampiasa izany avokoa ireo firenena manana seranan-tsambo any ivelany rehetra…
Ankoatra izay, manatanteraka varavarana misokatra hitafatafana amin’ny vahoaka, indrindra ireo mpandraharaha, ny eo anivon’ny Spat nanomboka omaly, ary mbola mitohy anio izany ao amin’ny Lapan’ny tanànan’i Toamasina.